ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: စိမ်းလန်းရေး နေ့ရက်ရှည်များနှင့် ကျမ
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 9:46 PM
Nge Naing, November 24, 2009 at 1:44 AM
ကျွန်မက ကိုချစ်ဖေ ဇာတ်လမ်းထင်ပြီး ဖတ်လာခဲ့တာ အဆုံးကျမှ သူများဇာတ်လမ်းမှန်း သိရတယ်။ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးအတွက် အချစ်ရေးအပါအ၀င် အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်သွားသူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး လက်တွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပေမယ့် ပြန်ဆုံရပါစေလို့တော့ ဆုတာင်းပါတယ်။
မြစ်ကျိုးအင်း, November 24, 2009 at 4:06 AM
နိင်ငံအတွက် စတေးခံသွားရတဲ့ သွေးတွေ ချွေးတွေ အသက်တွေ နှလုံးသားတွေ မရေမတွက်နိင်အောင်ပါပဲ
ဒါလည်း စတေးလိုက်ရတဲ့ နှလုံးသားတခု အကြောင်းပါပဲ။
အခါခါကြားနေခဲ့ရပေမယ့် ထပ်ဖတ်ရတိုင်း ထပ်ကြားရတိုင်း စိတ်မကောင်းခြင်းက အမြဲလိုလို ဖြစ်နေရတာပါပဲ။
Ko Toe Gyi ( Multiply Boo Boo Gyi ), November 24, 2009 at 7:06 AM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း, November 24, 2009 at 4:16 PM
Ko Toe Gyi ( Multiply Boo Boo Gyi ), November 24, 2009 at 4:26 PM
အဆင့် ၅ ကနေ အဆင့် ၁၀ အတွင်း ရတာကို မတော်ပါဘူး လို့ ပြောရအောင် ဦးချစ်ဖေကြီး ဘယ်လောက်မှတော်တယ်ပြောမှာတုန်းဗျ ကျတော်လူ၇၀ မှာ အဆင့် ၃၂ ရတာ တော်တယ်ဘဲထင်နေခဲ့တာလေ
ထောင် သုံးခါ ကျဘူးတဲ့ကျောင်းသားတယောက်သူကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာ-----???????
ကျတော် မသိတာ တော်တော်ညံ့တာဘဲ
ဆောင်းယွန်းလ, November 24, 2009 at 4:33 PM
ပို့စ်မတင်ခင်နေ့က ပေးဖတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ...မနေ့ကဖတ်မလို့လုပ်ပြီးနှ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဖုန်းပြောနေတာကြာသွားလို့ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး...အခုမှ လာဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျာ....
ချစ်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်တောင်မှ အနီးစပ်ဆုံး ခင်မင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ စဉ်းစားနေမိတယ်..
ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့ကြတဲ့ ဘဝတွေ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ တော်တော်များများရှိခဲ့မှာပဲလို့လည်း စဉ်းစားနေမိတယ်ဗျာ...
စိတ်ထဲမှာ နှစ်ရှည်လများ မြိုသိပ်ထားခဲ့သမျှကို အခုမှ ဖွင့်ထုတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ သွက်လည်းသွက် ထက်လည်းထက်တယ်ဗျာ.....
ကိုချစ်ဖေ, November 24, 2009 at 5:50 PM
ကော်မန့်တွေဖတ်ရတော့ ရေးရတာအားရှိပါတယ်ဗျာ.ကျနော့်အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ဇာတ်လမ်းပါ.
အဓိက ပြောပြသူက ကောင်မလေးမို့ ကောင်မလေးနေရာက ၀င်ရေးတာပါ.ကောင်လေးနေရာကဆို ဘာမှမသိရပါဘူး.ဘာမှလည်းမပြောပါဘူး..ဗျာ.သူကကြိတ်ပုန်းခံစား သူ.
ကိုချစ်ဖေကြီးလည်း ထောင်အကြောင်းတွေရေးရင်း မောင် အကြောင်းပါရေးချင်လာလို့ပါ. ကိုချစ်ဖေလည်း အသည်းနဲ့ပဲလေဗျာ ကိုကျောက်ရယ်.ဟဲဟဲ.(အဖေတို့ခေတ်ကသီချင်းလို)နောက်သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကျနော့် အရေးအသား အရုပ်ဆိုးဆိုးသမီးလေးကို ကွန်းတောင်ကိုင် မြှောက်နေတော့ သိသိကြီးနဲ့ သဘောတွေကြ ပီတိတွေဖြစ်နေတာ..အဲ့ဒါနဲ့ ရေးဖြစ်နေတော့တာ.လာဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အပြင်မှာဆို လက်ဖက်ရည်လိုက်တိုက်ရင်း ကိုချစ်ဖေကြီးပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့နေချင် သဗျာ..
yannaung, November 24, 2009 at 6:33 PM
ကိုချစ်ဖေ နဲ့မသောင်းညွန့် အကြောင်းလေးက ဖတ် လို့့ကောင်းသားဗျ။
Ko Oo, November 25, 2009 at 1:42 AM
ရောက်ပါတယ်ဗျို့ ။ ရေးစရာ နေရာမရှိလို့ ဒီနေရမှာပဲ ပွားသွားတယ်။ စာတွေလည်း တော်တော်များများ ဖတ်သွားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လည်းလာလည်အုံးမယ်ဗျာ။ အောင်မြင်ပါစေ။